အက်စ်တွန်ဗီလာကို ၁-၀ နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှ ယူနိုက်တတ် ကစားသမားတွေရဲ့ အမှားများ – Myanmar Sports United
ရာသီ အစပိုင်းပဲ ရှိသေးတာကြောင့် ဒီရှုံးပွဲကတော့ ထိပ်ဆုံးက အသင်းတွေ နဲ့ အမှတ်ကွာဟမှုက သိပ်ပြီးတော့ ကြီးကြီးမားမား ရှိဦးမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ယူနိုက်တက် ရဲ့ အနေအထား ကတော့ ချန်ပီယံလောင်း စာရင်းထဲကနေ စောစောစီးစီးထုတ်ပယ် ထားလို့ ရပြီဆိုတာ သေချာနေတာ တွေ့ရ ဘာတယ် ။
ဒီပွဲမှာ ၃ မှတ် ရဖို့ အတွက် ဆိုးရှား က ကြားရက်မှာ ကစားတဲ့ ကာရာဘောင် ဖလားပွဲ ကိုတောင် အရန်တွေ နဲ့ ချည်း ကစား သွားခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ ပွဲကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ မျှော်လင့်ထားမှုတွေ ကို ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့ တာ ပါပဲ ။
ယူနိုက်တက် တို့ လူစုံ ပွဲထွက် လာခဲ့ပြီး အခွင့်အရေးတွေလည်း အများကြီး ရခဲ့ ပါ တယ် ။
ဒါပေမယ့် အချိတ် အဆက် မမိမှု ၊ အဆုံးသတ် အားနည်းမှုတွေ က ဂိုးမရ စေခဲ့သလို ခံစစ် ရဲ့ အားနည်းချက် တွေကလည်း ဗီလာ ကို အခွင့်အရေး ပြန်ရစေခဲ့ ပါ တယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ ကတော့ နည်းပြ ရဲ့ ညွှန်ကြားမှု အတိုင်း အကွက် ကျကျ ကစားနိုင် ခဲ့ပြီး ရိုနယ်ဒို ဦးဆောင် လာတဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် ကို ခုခံ ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပါ တယ် ။
ပွဲပြီး ခါနီး မှာတော့ ဗီလာ နောက်ခံလူ ဟေ့စ် က ထောင့်ကန်ဘော ကနေ ခေါင်းတိုက်ပြီး ဧည့်သည် အသင်းအတွက် ဂိုးစသွင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
မိနစ် ၉၀ ကျော်မှာတော့ ဟေ့စ် ရဲ့ လက်ထိဘောကနေ ယူနိုက်တက် တို့ ပင်နယ်တီ ရခဲ့ပေမယ့် ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် က ဂိုးပေါက် နဲ့ လွဲအောင် ကန်ခဲ့တာကြောင့် သရေ ၁ မှတ်တောင် ပြန်မရဘဲ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဆိုးရှား ကတော့ ပွဲအပြီးမှာ ဆင်ခြေတွေ ပေးဖို့ ကြိုးစား နေဦးမှာ ပါပဲ ။
ဘယ်လိုပဲ ဆင်ခြေတွေ ပေးနေပါစေ . . . ယူနိုက်တက် ဟာ ဒီရာသီ မှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်လောက်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိမနေဘူးဆိုတာ ကတော့ စက်တင်ဘာထဲ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲတွေက သက်သေပါပဲ ။
အဲ့ဒီပွဲမှာ ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ သရဲနီတို့ရဲ့အမှားတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မက်ဂွိုင်းယား ကဒီလိုအမှားမျိုးကျူးလွန်နေတာ ဒီတစ်ပွဲတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့လဲ De Gea ကိုယ်တိုင် ဆူရတဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂရင်းဝုဒ် Vs ဖာနန်ဒက်
သူတို့နှစ်ယောက်ကြားဘာပြသာနာရှိလဲ မသိရပေမဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်နေတာ ပွဲစဉ် (၅) ဝက်ဟမ်းကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာကတည်းကပါ။
ဂရင်းဝုဒ် ကဂိုးအရမ်းလိုချင်နေတာပါ။ တစ်လုံးတစ်လေ ကန်ထည့်တာကိစ္စမရှိပေမဲ့ အလုံးတိုင်းဖြစ်သလို ဆွဲဝင်၊ကန်သွင်းလုပ်နေတာက ကောင်းတဲ့အချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဖာနန်ဒက် ကတော့ဂိုးပေါက်နဲ့တစ်ခါမှ မလွဲဖူးတဲ့ သူ့ရဲ့ပင်နယ်တီစံချိန်ကိုချိုးပြီး မိုးပေါ်ကန်ခဲ့တာက အတော်လေးရုပ်ပေါက်ပါတယ်။
ဆိုလ်းရှားကတော့ ဒီလိုကတောက်ကဆဖြစ်နေတဲ့ ဂရင်းဝုဒ် နေရာ ဆန်ချို နဲ့ လင်ဂတ် ကိုဘာကြောင့် မိနစ် (၆၀) လောက်မှာ မထည့်ခဲ့တာလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ ကွင်းလယ်မှာလဲ တော်မီနေး နဲ့ဖရက် အတွဲကအရင်လို အဆင်မပြေနေခဲ့တာကို အချိန်မီ မပြုပြင်ခဲ့တာကလဲ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။
အားလုံးချုံကြည့်လိုက်ရင် နည်းပြမှာ သာမက ကစားသမားတွေပါ ပြုပြင်ရမဲ့အနေအထားတွေရှိလာပါပြီ။
ဘယ်တုန်းကမှ မရှုံးခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးရတာဟာ အတော်လေးစိတ်ပျက်စရာပါပဲ။
ရာသီ အစပိုငျးပဲ ရှိသေးတာကွောငျ့ ဒီရှုံးပှဲကတော့ ထိပျဆုံးက အသငျးတှေ နဲ့ အမှတျကှာဟမှုက သိပျပွီးတော့ ကွီးကွီးမားမား ရှိဦးမှာ မဟုတျပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အနအေထား ကတော့ ခနျြပီယံလောငျး စာရငျးထဲကနေ စောစောစီးစီးထုတျပယျ ထားလို့ ရပွီဆိုတာ သခြောနတော တှရေ့ ဘာတယျ ။
ဒီပှဲမှာ ၃ မှတျ ရဖို့ အတှကျ ဆိုးရှား က ကွားရကျမှာ ကစားတဲ့ ကာရာဘောငျ ဖလားပှဲ ကိုတောငျ အရနျတှေ နဲ့ ခညျြး ကစား သှားခဲ့တာပါ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီကနေ့ ပှဲကတော့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ မြှျောလငျ့ထားမှုတှေ ကို ဖကျြဆီး ပဈခဲ့ တာ ပါပဲ ။
ယူနိုကျတကျ တို့ လူစုံ ပှဲထှကျ လာခဲ့ပွီး အခှငျ့အရေးတှလေညျး အမြားကွီး ရခဲ့ ပါ တယျ ။
ဒါပမေယျ့ အခြိတျ အဆကျ မမိမှု ၊ အဆုံးသတျ အားနညျးမှုတှေ က ဂိုးမရ စခေဲ့သလို ခံစဈ ရဲ့ အားနညျးခကျြ တှကေလညျး ဗီလာ ကို အခှငျ့အရေး ပွနျရစခေဲ့ ပါ တယျ ။
အကျစတှနျ ဗီလာ ကတော့ နညျးပွ ရဲ့ ညှနျကွားမှု အတိုငျး အကှကျ ကကြ ကစားနိုငျ ခဲ့ပွီး ရိုနယျဒို ဦးဆောငျ လာတဲ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈ ကို ခုခံ ကာကှယျ နိုငျခဲ့ ပါ တယျ ။
ပှဲပွီး ခါနီး မှာတော့ ဗီလာ နောကျခံလူ ဟစျေ့ က ထောငျ့ကနျဘော ကနေ ခေါငျးတိုကျပွီး ဧညျ့သညျ အသငျးအတှကျ ဂိုးစသှငျးပေးခဲ့ပါတယျ ။
မိနဈ ၉၀ ကြျောမှာတော့ ဟစျေ့ ရဲ့ လကျထိဘောကနေ ယူနိုကျတကျ တို့ ပငျနယျတီ ရခဲ့ပမေယျ့ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ က ဂိုးပေါကျ နဲ့ လှဲအောငျ ကနျခဲ့တာကွောငျ့ သရေ ၁ မှတျတောငျ ပွနျမရဘဲ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဆိုးရှား ကတော့ ပှဲအပွီးမှာ ဆငျခွတှေေ ပေးဖို့ ကွိုးစား နဦေးမှာ ပါပဲ ။
ဘယျလိုပဲ ဆငျခွတှေေ ပေးနပေါစေ . . . ယူနိုကျတကျ ဟာ ဒီရာသီ မှာ ခနျြပီယံ ဖွဈလောကျတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိမနဘေူးဆိုတာ ကတော့ စကျတငျဘာထဲ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲတှကေ သကျသပေါပဲ ။
အဲ့ဒီပှဲမှာ ကြူးလှနျခဲ့ကွတဲ့ သရဲနီတို့ရဲ့အမှားတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
မကျဂှိုငျးယား ကဒီလိုအမှားမြိုးကြူးလှနျနတော ဒီတဈပှဲတညျးမဟုတျပါဘူး။ ဒီနလေဲ့ De Gea ကိုယျတိုငျ ဆူရတဲ့အနအေထားဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဂရငျးဝုဒျ Vs ဖာနနျဒကျ
သူတို့နှဈယောကျကွားဘာပွသာနာရှိလဲ မသိရပမေဲ့ ကတောကျကဆဖွဈနတော ပှဲစဉျ (၅) ဝကျဟမျးကိုနိုငျတဲ့ပှဲမှာကတညျးကပါ။
ဂရငျးဝုဒျ ကဂိုးအရမျးလိုခငျြနတောပါ။ တဈလုံးတဈလေ ကနျထညျ့တာကိစ်စမရှိပမေဲ့ အလုံးတိုငျးဖွဈသလို ဆှဲဝငျ၊ကနျသှငျးလုပျနတောက ကောငျးတဲ့အခကျြမဟုတျပါဘူး။
ဖာနနျဒကျ ကတော့ဂိုးပေါကျနဲ့တဈခါမှ မလှဲဖူးတဲ့ သူ့ရဲ့ပငျနယျတီစံခြိနျကိုခြိုးပွီး မိုးပျေါကနျခဲ့တာက အတျောလေးရုပျပေါကျပါတယျ။
ဆိုလျးရှားကတော့ ဒီလိုကတောကျကဆဖွဈနတေဲ့ ဂရငျးဝုဒျ နရော ဆနျခြို နဲ့ လငျဂတျ ကိုဘာကွောငျ့ မိနဈ (၆၀) လောကျမှာ မထညျ့ခဲ့တာလဲ စဉျးစားစရာပါ။ ကှငျးလယျမှာလဲ တျောမီနေး နဲ့ဖရကျ အတှဲကအရငျလို အဆငျမပွနေခေဲ့တာကို အခြိနျမီ မပွုပွငျခဲ့တာကလဲ မေးခှနျးထုတျစရာပါပဲ။
အားလုံးခြုံကွညျ့လိုကျရငျ နညျးပွမှာ သာမက ကစားသမားတှပေါ ပွုပွငျရမဲ့အနအေထားတှရှေိလာပါပွီ။
ဘယျတုနျးကမှ မရှုံးခဲ့ဖူးတဲ့အသငျးကို အိမျကှငျးမှာ ရှုံးရတာဟာ အတျောလေးစိတျပကျြစရာပါပဲ။
ယူနိုက်တတ်မှာ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ သက်ရောက်မှုနဲ့အတူ ဆုဖလားတွေကိုင်မြှောက်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒီဂီယာ